रअ प्रमुखको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई रवीन्द्र मिश्रका ८ प्रश्न :: Setopati
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, कात्तिक ९
६. भएको भए, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले 'हामीलाई गोयलको भ्रमणबारे जानकारी छैन' किन भनेको? अनि तपाईं अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा आएको भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई किन जानकारी भएन?
'ढाकछोपको पनि सीमा हुन्छ। यो देशको स्वाभिमान यति तल्लो तहमा विरलै झरेको थियो। सुसंस्कृत राजनीति भएको देशमा हो भने प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याएको गम्भीर आरोपमा छानबिन हुन सक्थ्यो,; मिश्रले भनेका छन्, 'तर विडम्बनाको कुरा, भ्रष्टाचारमात्र होइन यो देशमा राष्ट्रघातलाई सहन गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दैछ।'
प्रकाशित मिति: आईतबार, कात्तिक ९, २०७७, ०८:३१:००